Maalinta: Sebtember 16, 2019
Tirada adeegyada tareenka xamuulka ah ee u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub waxay gaareen 5 kun oo 266 ah siddeeddii bilood ee ugu horreeyay sannadka. Kororka boqolkiiba 25 marka loo eego sanadkii hore, adeegga tareenka, waa mid aad u muhiim ah [More ...]
400, 15 ee ficilada Axadda oo ay soo saareen United Shaqaalaha Shaqaalaha Gaadiidka iyo Haydarpaşa Solidarity laga soo bilaabo usbuucii ugu horreeyay, ayaa la qabtay Sebtember 2019 Axadda. Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee United States (BTS) 400. [More ...]
Isweydaarsiga R Bridge Bridge ayaa Wadada loo furay
Wadnaha taraafikada ee Sanliurfa, Isgoyska Raadiyaha Isdhaafsiga Degdegga ah ayaa loo furay taraafikada. Duqa Magaalada Şanlıurfa Duqa Magaalada Caasimadda Zeynel Abidin Beyazgül'un dadaallada xawaare ku socda waxaa la furay Buundada Isweydaarsiga Degdegga ah si loo gaaro taraafikada maalinta loo cayimay. jidadka waaweyn [More ...]
Kadib tartamada caalamiga ah ee 'Mountain Bike Championship Sakarya MTB Cup' oo ay soo qabanqaabisay Dowlada Hoose ee Magaaladda Metropolitan ee hoos imaanaysa xafiiska Madaxweynaha, ayuu yiri Ekrem Yüce oo yiri, "Kahor Horyaalnimada World Bike Marathon World Mountain Bike Marathon, 'Nadiifin [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dayactirka wadooyinka, dayactirka iyo cusboonaysiinta ee ka socota magaalada. Macnaha guud, degmada Başiskele ee Doğantepe Neighborhood İstiklal Street waxaa dib loo cusbooneysiiyay shaqadii khusaysay. Waxaa qabtay Waaxda Sayniska [More ...]
Wadada la taaban karo ee loo maro Izmit Gedikli iyo Tuulooyinka Zeytinburnu
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo fulisa mashruucyo waa weyn oo gaadiid ah, ayaa waxay ka fulineysaa dayactirka wadooyinka, dayactirka iyo howlaha dayactirka ee tuulooyinka iyo sidoo kale xarumaha magaalada. Wadooyinka oo ay ugu wacan tahay kaabayaasha ay u shaqeeyaan ISU [More ...]
Saacadaha Shaqada Gawaarida ee Bursa Cable Waa la Bedelay. Turkey ayaa Uludag by baabuur cable noqon doona digniin u yimid mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka muhiim ugu ah iyo dabeecadda. Iyada oo leh xirmooyinka xNUMX, waxay qaadi kartaa kun rakaab ah 140 saacaddiiba, [More ...]
Mashruuca Gaziray, oo loo hirgaliyay xallinta dhibaatada gaadiidka ee Gaziantep, ayaa wali sii wada shaqada. Gobolka Cisbitaalka MedicalPark, 5 wuxuu u jilicsanaa gaadiidka ka safka kiiloomitirkii 800 kiiloo mitir dhulka hoostiisa, halka Gaznay's 2020 [More ...]
Wasiirka ganacsiga Ruhsar Pekcan, oo ah warshad sameeyaha Jarmalka ee Volkswagen warshad cusub ayaa laga dhisi doonaa Manisa, warshada ayaa laga dhisi doonaa xitaa gobolka lagu dhawaaqay. Erayadaas, shaqada heer-gobol ee warshadda in muddo ah ayaa sidoo kale la muujiyay [More ...]
Waa maxay xaaladdii ugu dambeysay ee mashruuca Kanal İstanbul, oo ay dadka reer Istanbul ay si aad ah u sugayaan? Maalgashadayaasha iyo milkiilayaasha dhulka ma ku dhawaaqeen qorshayaal loogu talagaleyso dayactirka Kanal Istanbul maalmihii ku dhow dhamaadka 2019? Goorma ayeyna Idaacadda Istanbul bilaabi doontaa? [More ...]
Nidaamka Tareenka Fudud ee u rogida Tangle ee Trabzon wuxuu sii wadaa wadahadalka
Mashruuca Nidaamka Tareenka Fudud, oo muddo sanado ah ku sugnaa Trabzon oo ay ka dhawaajiyeen kooxo badan laakiin weli la rajeynayo inuu dhammeystiro, wuxuu sii wadaa inuu sii wado diiranaanta ajandaha Trabzon. Ku saabsan mashruuca si dhaw ula socda magaalada [More ...]
Yarkadaş oo ka socda CHP wuxuu sheegay in dhulka ku lifaaqan xarunta tareenka ee Haydarpaşa loo huray in lagu kireeyo magaca Sanat Youth Art Area tı wuxuuna ku baaqay in durdur Joojiso dhaqankan ”. Yarkadaş wuxuu yidhi, aag kale oo ay leedahay Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa waxaa isticmaala Wasaaradda Dhaqanka. [More ...]